Nzira yekuchengetedza sei kubva kuCoronavirus? | RayHaber | raillynews
mushaGENERALNzira yekuchengetedza sei kubva kuCoronavirus?
Nzira yekudzivirira kubva kune coronavirus
KUSVIRA PAKUSHANDISA KWESHUKA
Akatsanangura kuti Ministry of Health haidi kupfeka mamask kune vasina-varwere. Izvo zvakanzi kupfeka mask kunogona kutungamira kune "pfungwa yenhema yekuchengeteka". Sezvo akapfeka mask, kufunga kwe 'ok ndakachengetedzwa' kunoitika. Ivo vanorwara vanokurudzirwa kupfeka masiki. Zvakanyanya kukosha kuti vasiri-varwere vatore matanho ekuzvidzivirira atinoverenga tisati tapfeka mask.
Motokari yemotokari inoshanda sei?
Snow Storm muUludag
Chimvuramabwe chakamira kusimudzira mapambo eUludağ
Nzira yekudzivirira sei njodzi muUludağ Ski Center
Iyo Marmaray Project inobata sei kutakura kwegungwa
Nzira Yokuvaka Sei Gorozi?
Nzira Yokusvika Sei kuAlunizade Metrobus Stop?
Nzira yekugadzirisa dambudziko rekutakura muBursa?